Igumbi lokulala eli-2 elihlala kwindalo eHúsavík - I-Airbnb
Igumbi lokulala eli-2 elihlala kwindalo eHúsavík
Húsavík, Kaldbakur, Iceland
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguKaldbakur
Indlu yethu enamagumbi amabini okulala ibambene kwindalo kwidolophu yaseHúsavík enombono ophefumlayo isebenza njengekhaya elincinci, kude nekhaya apho unobumfihlo obuninzi kunye nentuthuzelo ngokusondeleyo kumoya wendalo kangangoko kunokwenzeka.
Indawo iyamangalisa njengoko inombono ophefumlayo, ubomi beentaka obuninzi, indalo ebukekayo kunye nezilwanyana zasendle, ubutofotofo belizwe kunye nemisebenzi yasezidolophini kunye nenkonzo edolophini.
Iindlela zokuhamba zigudle amachibi nakwiindawo ezingqongileyo.
Ubuncinci bokurenta bubusuku obu-2.
Indlu ikumgangatho omnye (30 sqm, kunye ne-10 sqm terrace) enamagumbi okulala ama-2:
Igumbi elinye lokulala elinebhedi ephindwe kabini kunye nelinye igumbi elineebhedi ezi-2 ezingatshatanga, igumbi lokuhlala elithambileyo elincinci elinesofa kunye netafile yokutyela.
Itafile, izitulo kunye ne-charcoal barbecue zingaphandle kwiveranda.
Indlu inegumbi lokuhlambela labucala elineshawa, kunye nekhitshi elinazo zonke izinto eziyimfuneko zokupheka ukulungiselela ukutya okuncinci.
Izixhobo eziqhelekileyo ziquka i-TV/irediyo, uqhagamshelo lwe-intanethi, i-iron, isomisi seenwele, amanzi ashushu nabandayo, umbane kunye nokufudumeza kwe-geothermal.
Senza konke okusemandleni ethu ukugcina umoya wangaphakathi kwiindlwana zethu zingenawo amavumba, ukungunda, iikhemikhali, kunye nezinyibilikisi ukuze zilungele abantu abanengxaki yokwaliwa, iingxaki zokuphefumla okanye ukuva imichiza emininzi (MSC).
Siya kuba nombulelo ukuba iindwendwe zethu zinciphisa kangangoko kunokwenzeka ukusetyenziswa kweemveliso eziqholiweyo ngelixa zihleli nathi.
Ibandakanyiwe kwixabiso yi-SELF CATERING iilinen zebhedi kunye neetawuli.
Le ndlu yenzelwe ukuhlalisa ukuya kwiindwendwe ezi-4.
4.83 · Izimvo eziyi-23
Uninzi lwezona ndawo zinomtsalane kwaye zinika umdla e-Iceland zingaphakathi kwe-100 km ukusuka e-Húsavík, kwindawo ebukekayo eyi-260 km ubude "I-Diamond Circle" - I-Húsavík-Dettifoss-Myvatn-Húsavík uhambo lokuya nokubuya.
Ngenxa yendawo yethu egqwesileyo, sinokucebisa ubuncinci iintsuku ezine ukonwabela ngokupheleleyo i-Húsavík kunye ne "Diamond Circle".
Chitha usuku olunye kwindawo yaseMyvatn. Ngokudibeneyo, iPaki yeSizwe kunye ne "Dettifoss" indawo, ifanelwe ubuncinane usuku olunye.
Gcina usuku olunye ukuqhuba "iDiamond Ring Road" kwaye undwendwele zonke iindawo ezincinci ezinomdla.
Endleleni, abahambi badibana neeNqaba eziMnyama, "iNama-fjall" iGeysers, iCrater of Hell, iBlue Lagoon yaseMantla, intaba-mlilo "Krafla", iWaterfall of Gods, "Asbyrgi" canyon, "Jokulsargljufur" Canyon Ipaki yeSizwe, iifosili kunye neentaka ze "Tjornes", iimyuziyam ezintandathu ezinomdla kunye neentlambo zasentla.
Okokugqibela, ungaphoswa yi-Húsavík yethu entle apho unokuya kubukela iminenga, ukurhweba, ukukhwela ihashe, igalufa, ukuqubha okanye ukukhwela intaba.
I "Diamond Ring Road" inyathelwe kwimbali kwaye zonke iinduli zibonelela ngombono omtsha owothusayo.
Imisebenzi emininzi ifikeleleka ngokulula, kubandakanya igalufa, ukubukela iintaka, ukukha amaqunube kunye nokuloba simahla (iimitha ezingama-30 ukuya echibini).
Umbuki zindwendwe ngu- Kaldbakur
This is a family run business where we all have a role. During high season we get some extra hands to help us out.
Sihlala kwindlu esecaleni kwendawo, ngoko unokuhlala uthembele kuthi ukuba sikunike isandla, ingcebiso yendawo okanye nantoni na oyifunayo.
Siyabuhlonipha ubumfihlo babantu kwaye sifuna ukuhlala kwabo kube noxolo, ke asikuphazamisi ngexesha lokuhlala kwakho :-)
Siyabuhlonipha ubumfihlo babantu kw…
Inombolo yomthetho: LG-REK-011994